Shaqadii Dekada Magaalada Kismaayo oo Saaka Hakad ku Jirta iyo Ciidamada Axmed Madoobe oo Halkaasi isku Geedaamay
Home Somali News East Africa Shaqadii Dekada Magaalada Kismaayo oo Saaka Hakad ku Jirta iyo Ciidamada Axmed...
Dad kusugan Magaalada Kismaayo ee Xarunta gobolka J/hoose ayaa waxay sheegayaan in saaka hakad ku jirto dhaq dhaqaaqii dekada magaalada Kismaayo halkaasi oo lagu soo waramayo in ciidamo badan gudaha iyo banaankaba joogaan.
Wararka lagu kalsoonaan karo waxay sheegayaa in hakadka shaqada ay ka dambeyso kadib markii la sheegay wafdi caalami ah maanta lagu wadaa inay gaaraan magaalada kismaayo.
Dadka qaar ayaa sheegaya in ciidamada Maamulka Raaskambooni ee kusugan magaalada Kismaayo isku fidiyeen dekada kismaayo islamarkaana gaadiidka dhuxusha ku raran tahay ku amray inay iskaga baxaan si wafdiga markii ay tagaan halkaasi u’arkin.
Saraakiil katirsan maamulka Kmg ee kusugan magaalada Kismaayo xiriir aan lasameynay ayaa inoo taaba-geli waysay inan qadka taleefoonka ku haleelno xilli dad badan ay hadal hayaan waxa ka socda saaka Dekada Kismaayo iyo wafdiga halkaasi kormeerka ku tagaya sida qorshaha uu yahay.
Wixii kasoo kordha insha allah Midnimo.Com dib kala soco insha allah.